Browsing: » Home »သူ့အကြောင်း»အစိမ်းရောင်ဂုမ်ဘဒ်တော်ပေါ်ရှိ ပြတင်းပေါက်က ဘာလဲ?	Leaveacomment
အစိမ်းရောင်ဂုမ်ဘဒ်တော်ပေါ်ရှိ ပြတင်းပေါက်က ဘာလဲ?	Posted by danyawadi on December 20, 2015 in သူ့အကြောင်း, အစ္စလာမ်ဘာသာ	မဒီနဟ်ရွှေမြို့တော်၊မတ်စ်ဂျေဒေနဗဝီဝတ်ကျောင်းတော်ရှိ နောက်ဆုံးမဟာမြတ်တမန်တော်ကြီး မုဟမ္မဒ်(صلی اللہ علیہ وسلم)ရဲ့ လှဲလျောင်းအနားယူတော်မူနေရာ ရောင် ဇွာ ဥယာဉ်တော်အပေါ်တည့်တည့်မှာ ဆောက်တည် ထားတဲ့ အစိမ်းရောင်ဂုမ်ဘဒ်အခုံးတော် ပေါ်မှာမြင်တွေ့ နေရတဲ့ ဒီအရာဟာ တကယ်တော့ကဗရ်တခုခုမဟုတ် ပါဘူး။ စင်စစ်အဲဒါဟာ မိခင်မွန်အာအိရှဟ်(رضی اللہ عنہا)သခင်မရဲ့အမိန့်နဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြတင်းပေါက် တခု ပဲဖြစ်တယ်။
← ဒေါ်နယ်ထရမ့် အလိုမရှိ။ နိုင်ငံတွင်း မွတ်စ်လင်မ်များ ၀င်ရောက်ခြင်းကို ငါတို့ မတားဆီး (ဟီလာရီကလင်တန်၏ သ၀ဏ်စကား)	သမ္မတတာဝန်လွှဲပြောင်းပေးရေး အသေးစိတ်ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် ထပ်မံဆွေးနွေးမည် →